Ukuqeqeshwa kwe-Android kuNtuthuko nokuhlolwa
15 -nov 2016
Okusha ekuthuthukiseni kwe-Android nokuhlola
I-Android OS (uhlelo lokusebenza) lakhiwa yi-Google esetshenziswa yi-80% yamafoni aphezulu emhlabeni. Kusho ukuthi kukhona ithuba elimangalisayo Android abathuthukisi bekusasa labo elizayo. Uma sicabangela iqiniso lokuthi isizukulwane esilandelayo sabasebenzisi be-inthanethi (okungaphezu kuka-1 billion) singakwazi ukufinyelela i-intanethi okokuqala ku-mobile yabo. Ukuthuthukiswa ikhono lokuthuthukisa izinhlelo zokusebenza ze-Android ezihlelwe kahle futhi ezihlelwe kahle kuzokunikeza ithuba elihle lokuxhuma nenani labantu abaphendukela ku-intanethi banike amandla amafoni weselula ukuthola noma yiluphi ulwazi mayelana nanoma yikuphi ukuhamba noma ukuhamba emotweni noma esitimeleni .
Ngenhlanhla ngabantu abafisa ukufunda ukuthuthukiswa kwesicelo se-Android, ekuziphenduleleni kumthengi kubadali, kunezinketho eziningi kakhulu zokuziphishekela okuzokwenza umsebenzi omuhle kakhulu wokukusiza ukuthi ufunde okuyisisekelo izinhlelo ze-Android ne-Java. Uzophinde uqaphele ukuthi uqale inkambo ejabulisayo yokuba umthuthukisi we-Android ochwepheshe.
I-Android Training course yenzelwe abafundi abasha ku-Android futhi bafuna ukufunda ukuthi bangakha kanjani izinhlelo zokusebenza ze-Android ezinamandla futhi bazihlole. Into enhle mayelana nalokhu kuqeqeshwa kwe-Android ukuthi awudingi amakhono ochwepheshe ekukhokheni ikhodi ukuze uzibhalisele kulolu hlelo lokuqeqeshwa kwe-Android. Uma wazi ukuthi ungasebenzisa kanjani ifoni efonini ukukhipha i-intanethi noma ukuthumela izithombe nama-imeyili kubangani bakho, Kungenele.
Ukufunda Okuthile Okusha akulula:
Njengoba wazi ukuthi ukufunda noma yini entsha akulula ukuthi kungcono ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwe-Android / ukuhlola noma ukudweba izithombe usebenzisa i-Photoshop noma i-CorelDraw. Kufanele ube nesifiso kanye nomdlandla wokufunda okuthile okusha bese uqhubekela phambili ukuze ufinyelele ubuchwepheshe kuwo. Izifundo ezinhle zokuqeqesha ze-Android nezifundiswa ekuthuthukiseni / ukuhlolwa kwe-Android kuzokusiza ukuthi uhambe ngenqubo yokwenza izinhlelo zokusebenza ze-Android ezisebenzayo eziphezulu kakhulu kwimingcele yefomu nokusebenza.
Ukukhetha i-Best Training Institute:
Ekupheleni kohlelo lwe-Android Training, uzoba nolwazi olwanele lokuthuthukisa & Ukuhlola izinhlelo zokusebenza ezilula kodwa ezinamandla ongawabelana nabangani bakho. Kubaluleke kakhulu ukukhetha ukuhlinzeka ngokuqeqeshwa ngokuhlakanipha kusukela kuphela izikhungo zokufunda ezigunyaziwe ze-IT, ezifana I-innovative Technology Solutions, thola ulwazi lobuchwepheshe nolwazi olunikezwa kuwe.
Ukuphathwa kwe-Red Hat OpenStack (CL210) Ukuqeqesha ku-Gurgaon